Iindaba -I-Fang Ming-Solution-proof swirl slide esetyenzisiweyo kwinkqubo yokuma kwe-slag yokuguqula
I-Zhengzhou Fangming High-Temperature Ceramic New Material Co, Ltd.iqulunqe kwaye yafaka ezi zinto zimbini zilandelayo zintsha zokumisa izixhobo ze-slag zokufaka isicelo sokuguqula izixhobo ze-slag kunye nokufumana ukugunyazwa kwelungelo elilodwa lomenzi:
1. Isisombululo se-anti-metallic sishukuma ngesilayidi esitshintshayo: isixhobo esiguqulayo se-slag anti-swirl isilayidi sepaseji kunye nesicatshulwa esisetyenziselwa ukudlula kunye nokuvalwa kwentsimbi kunye nezinye izisombululo ezinobushushu obuphezulu. Ibandakanya izitena zentsimbi, impompo, izitena zemilomo engaphakathi, izitena zangaphandle zesilayidi, nangaphandle Isitena sesilayidi kunye nezitena zemilomo engaphandle yenziwe ngezitena ezi-5. Kwangelo xesha, isitena kunye nezitena ziqhagamshelwe nge-concave kunye ne-convex, ipleyiti esezantsi, umaleko onqabileyo okanye umaleko we-inlay kunye nendawo yokubambelela, udonga lwangaphakathi lwesisombululo sesitena sangaphakathi sesilayidi kunye nesilayidi sangaphandle izitena ziyilelwe ukwahluka Ijelo elime rhoqo li-concave kunye ne-convex. Inqwelo moya ebophayo phakathi kwebhloko yesilayidi yangaphakathi kunye nebhloko yesilayidi engaphandle icinezelwe ngoomatshini bangaphandle, kwaye akukho sithuba. Ukutyhalwa kwendlela yamandla angaphandle kubangela ukungavisisani phakathi kwebhloko yesilayidi yangaphakathi kunye nebhloko yesilayidi yangaphandle yokutsala ijelo.
Indawo ehambelanayo, isisombululo siyadlula; uyilo lwale mveliso lunokuthintela ukwenziwa kwesisombululo esijikelezayo esibangelwa luxinzelelo xa isisombululo sidlula phakathi kwethayile yesilayidi yangaphakathi kunye nesilayidi sangaphandle sesilayidi, kwaye sinyanzela isisombululo esiqhelekileyo esijikelezayo sibe sisisombululo esisezantsi. Ukutyhutyha ngokungaqhelekanga kwesisombululo sesisombululo kunye nokubambelela kwisinyithi kwesinyithi kubangele ukonakala kwangaphakathi kunye nangaphandle kwesilayidi esilinganayo somhlaba kunye nomonakalo wesitena sangaphakathi somlomo kunye nesitena sangaphandle somlomo ngesisombululo esijikelezayo. Inesiphumo esihle; igcina kakhulu izibonelelo, ngelixa igcina iindleko kwaye inyusa inkonzo yexesha elide kunye nokusebenza okunamandla. Okwesibini, uyilo olungagungqiyo lwe-concave-convex yesisombululo sesitishi se-crucible eyakhelweyo eyakhiweyo inokuyilwa ngokuzithandela, kwaye ayikhawulelwanga yimilo phantsi kwesiseko sokuqinisekisa ukuphuma kwesisombululo, okuphucula okuqhubekayo ngoku okukhulu- Imfuno yokuveliswa kwemveliso kunyibilikisi, ukucoca, nakwimizi mveliso yentsimbi.
2. Isilayidi sokufuduka esingaphezulu somzimba ochaseneyo ophantsi koxinzelelo: Inxulumene nomhlaba wezixhobo ze-metallurgical, ngakumbi i-anti-induction yokufuduka okuphezulu kwetyhubhu yangaphakathi yesilayidi esetyenziswa kumatshini wokumisa i-slag, kubandakanya ipleyiti yesilayidi , Kwaye umphezulu womsesane wangaphandle weplate yesilayidi ufakelwe Isiqwenga sokubotshwa, ipleyiti yesilayidi inikezelwa ngomngxunya wolwelo, kunye nomongo wangaphakathi weceram wokujikeleza isisombululo uhlelwe emngxunyeni. Isiseko sangaphakathi seceramic siquka umzimba ongaphakathi ongaphakathi. Udonga olungaphandle lomzimba ongaphakathi alugudanga, kwaye umphezulu womzimba ongaphakathi uyisetyhula kwaye uyolulela ngaphandle Kukho umphathi, umbindi womzimba ongaphakathi womzimba unesilinda ngembobo yokujikeleza isisombululo.
Icwecwe lesilayidi libandakanya i-substrate, ipleyiti yokugquma ubushushu kunye nepleyiti esezantsi ebotshelelwe kunye ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Ipleyiti yesilayidi isetyenziselwa indawo engaphakathi yeceramic yesisombululo esijikelezayo. Isiseko siyilelwe njengesakhiwo esidityanisiweyo semilo engu-T, kwaye isangqa sangaphandle sinokuyilwa njengesimo esingaqhelekanga, esinokuthintela ngokufanelekileyo iinxalenye zeceramic ezifakwe kwisilayidi esingasentla ekutshoneni nasekutshintsheni ngenxa yoxinzelelo oluphezulu lomhlaba phakathi iipleyiti zesilayidi eziphezulu nezingasentla kumaqondo obushushu aphezulu. Igcina kakhulu izixhobo, isindisa iindleko, inyusa ubomi benkonzo ye-skateboard iyonke, kwaye ikhuselekile kwaye inokwenzeka.